Miandry fipoahana si fidinana an-dalambe ? : tsy rototra amin’ny delestazy mahery vaika ny fanjakana | NewsMada
Miandry fipoahana si fidinana an-dalambe ? : tsy rototra amin’ny delestazy mahery vaika ny fanjakana
Par Taratra sur 08/02/2017
Mampikaikaika ny maro. Izay ny azo ilazana ny delestazy lavareny sy mahery vaika eto an-dRenivohitra sy saiky manerana ny Nosy. Tsy maha rototra ny fanjakana akory ny zava-miseho. Asa, miandry ny fipoahana ara-tsosialy angamba ? Mbola miaritra ihany ny vahoaka.
Telo volana,… telo taona aty aoriana, tsy voavaha ary tsy voafehin’ny fitondrana intsony ny delestazy manerana ny Nosy. Amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao, nasehony ny famoretana ao anatin’ny aizin-kitroka mandritra ny tontolo andro mandraka alina. Mitombo isa toy ny tsy nahavahany ny olana koa ny faharetan’ny “fanapahany” ny herinaratra ho an’ny mpanjifa (satria tsy azo tapahina ny any amin’ny Lapam-panjakana). Singanina fotsiny ny eto an-dRenivohitra, naharitra adiny iray tany am-boalohany, niakatra adiny roa, adiny telo,…., lasa adiny telo indroa miantoana taty aoriana, ary nanomboka tamin’ity herinandro ity, adiny efatra indroa na intelo miantoana mihitsy (Ambohiratrahaba, Analamahitsy, Itaosy, Antanimena, Behoririka, sns). Tsy mifidy fotoana intsony koa fa atomboka amin’ny fotoana hanombohana miasa amin’ny 8 ora maraina, hatramin’ny 12 ora antoandro. Misy faritra hafa tapahina amin’ny 1 ora (mandritra ny filazam-baovao any amin’ny onjampeo tsy miankina sasany), amin’ny 2 ora na amin’ny 3 ora tolakandro fotoana fiasana ho an’ny asam-birao sy orinasa mamokatra rehetra. Misy indray tapahina amin’ny 5 ora na amin’ny 6 ora hariva ary tsy averina raha tsy amin’ny 9 na amin’ny 10 ora alina, tsy afaka mijery vaovao amin’ny fahitalavitra ary efa ao anatin’ny fotoana hatoriana.
Maivana koa ny tosiky ny ranon’ny Jirama ary aman-jatony ny filaharan’ny daba mavo eny amin’ny paompim-bahoaka. Zara raha rano mitete sisa ny eny amin’ny paompy, na tsy mandeha mihitsy manomboka amin’ny 4 na amin’ny 5 maraina, ary tsy miverina raha tsy amin’ny hariva na amin’ny alina.
Any amin’ny faritra, efa niaritra nandritra ny telo taona ao anatin’ny fotoana maharitra isan’andro ny vahoaka. Niaretan’ny mpanjifa koa ny fampiakarana ny faktiora ao anatin’ny tolotra tsy misy fanajana ny mpanjifa intsony.
Milaza fa mijery akaiky ny olan’ny vahoaka ny fitondrana. Rehefa tena zohina anefa, tsy mamaha ny olan’ny vahoaka malagasy izy ireo, fa mamaha ny olana mety manohintohina ny sezany. Miantraika manerana an’i Madagasikara ny delestazy tena mahery vaika tsy fahita hatramin’izay.
Tsy faizina ny mpitantana tsy mahomby
Tsy manana vahaolana amin’ity delestazy ity ny fitondrana. Nampifandimbiasina fotsiny ny mpitantana, ny anaran’ny andraikitra, fa vao mainka nihalalina ny olana. Manana antontan-taratasy any amin’ny Bianco ireo mpitantana Jirama teo aloha, saingy nafenina ary tsy notohizana intsony ny fanadihadiana na anisan’ny tsindry ataon’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena aza ny famaizana ny meloka sy ny ady amin’ny kolikoly ary ny fanjakana tsara tantana.
Tsy vahana koa ny olana satria mety tsy manelingelina ny seza, nefa hainy ny nampidina ny vidin-tsolika, ny nisambotra ny mpanafim-bary, ny nampidina ny saran-dalana. Tsy misy ampahafantarina ampahibemaso, ny vahoaka, ny ny mpanjifa, ny mpandoa ny karamany (satria orinasam-panjakana ny Jirama), ny valin’ny fanadihadiana ny fitantanam-bola (audit), ny olana diaviny ankehitriny, raha tokony hotsorina raha nankaiza ny 300 miliara Ar, na mijanona ho sora-bola fotsiny. Raha tsy hoe “sanatria” potehina vonoina ny Jirama, amin’ny maha orinasam-panjakana azy.